FAQs - Foshan Chengpai Sanitary Ware Co., Ltd. '
F: Aiza ny seranan-tsambo?
A: Ny seranan-tsambo fandefasana anay matetika dia ny seranan-tsambo Foshan, Seranan'i Guanghzou ary seranan-tsambo Shenzhen.
A: Mandra-pahoviana no lohany ny ranonorana farany?
B: Ny fahadiovan'ny lohan'ny fandroana sy ny karazana rano ao an-trano no antony roa hamaritana hoe mandra-pahoviana no tsy tokony hosoloina lohan'ny fandroana. Ny ranonorana lohany dia tokony ho diovina indray mandeha isan-kerinandro ary mila soloina raha misy fanivanana, bobongolo, na fota ilay tsy tonga eny aorian'ny fanadiovana. Misy ny tolo-kevitra sasany hanoloana ny lohan'ny fandroana isan-taona, raha misy kosa milaza ny hisolo toerana afaka enim-bolana mba tsy hiorenan'ny bakteria ka hahatonga ny mpampiasa tsy hitera-doza. fa tsy misy LED fandroana lohany dia dimy taona.
F: Azo atao ve ny miasa roa miaraka?
A: Miankina amin'ny maodely novidinao izany. Ny ankamaroan'ny modely dia manana valizy diverter tokana izay isafidiananao asa iray isaky ny mandeha. Na izany aza, ny maodely sasany dia fantsom-pifandraisana roa izay mamela anao hiasa roa amin'ny fotoana iray.
F: Ny lohan'ny fandroako dia maodely manarato. Inona no tokony hataoko?
A: Raha mahita lamina famafazana hafahafa na jet misy rano mipetaka amin'ny zoro tsy mahazatra ianao, toa ny 90 degre na ny famafazana etsy sy eroa, dia matetika no lavaka famafazana na sakanan'ny ampahany.
F: Inona no tokony hojereko eo am-pametrahana loha loha vaovao?
A: Eny, azonao atao ny manafatra ny habetsahana ary azonay atao ny mitondra ny fitoerany ho torolàlanao.
F: Inona ny haben'ny fantsona ilaiko amin'ny loha Shower, ½ '' na ¾ ''?
A: Ny lohan'ny fandroana Chengpai dia natsangana ho an'ny tsipika famatsiana ½ ''. Raha manana tsipika famenoana ¾ '' ianao dia azonao atao ny mampihena azy ireo amin'ny toerana misy azy mankany ½ ''.
F: Azontsika atao ve ny manamboatra kaontenera fanamafisana?
F: Ahoana no hahazoako santionany Led Shower Head?
A: Azafady mifandraisa aminay ary ampahafantaro ny entana ilainao.
Hanao PI izahay raha handoa izany. Rehefa fandoavam-bola dia azo avy, isika, dia ho afaka izany aminareo.
Q: Inona no atao hoe Rain Head fandroana?
A: Ny lohan'ny fandroana orana dia mahatonga ny fivoahan'ny rano ho toy ny orana. Ny maodely fandroana Chengpai rehetra dia mamela ny mpampiasa hanitsy ny fikorianan'ny rano ka io karazana orana io no mahazo aina ho azy ireo. Ireo lohan'ny fandroana ireo matetika dia toy ny kapila misy lavaka fingotra ao anatiny.
F: Tahaka ny ahoana ny lamina famafazana rotsakorana?
A: Izy io dia vokatra mampitony tokoa, ho an'ny spray marihitra kokoa, ny ankamaroan'ny olona dia mifindra amin'ny fandroana, safidy tsara hananana.
F: Azo atao ve ny manana fandroana ambony ranoka miaraka amina fandroana fangaro ao Chengpai?
A: Eny, misy isan-karazany ny fandroana fangaro amin'ny bar Chengpai misy ny kojakoja amina lohany ao anatin'izany ny mixeur bar.
Q: Do I mila haka rail?
A: Ny kaody fananganana eo an-toerana dia mety mitaky lalamby. Ity dia lalantsara fanampiny napetraka ambany eo amin'ireo paositra, natao hanomezana fahafaha-mora kokoa ho an'ireo miakatra sy midina tohatra. Raha toa ka misy tohatra ny tetikasanao dia zava-dehibe ny manamarina raha ilaina ny lalàm-pandrika any amin'ny faritra misy anao.
F: Inona no mila jerena indrindra rehefa mifantina sy mametraka fandroana mixer miafina?
A: Zahao fa ny rafitry ny rindrina dia mahazaka ny fivezivezin'ny fantson-drano sy ny trano amin'ny halalin'ilay mixer voafantina. Hamarino tsara fa ny enta-mavesatra mafana sy mangatsiaka dia mampiditra ny tsindrona marina amin'ny mixer alohan'ny hanamboarana ny rindrina. Hamarino tsara fa rehefa apetaka amin'ny plastera sy fanaovana taila manodidina ny fandroana mixer izay azo alain-tahaka amin'ny fikojakojana ho avy ny fanivanana sy ny valizy
F: Mpanamboatra na orinasa mpivarotra ve ianao?
A: mpanamboatra izahay. Ny orinasa misy anay dia misy tanàna Foshan, akaikin'ny tanànan'i Guangzhou sy ny tanànan'i Shenzhen. Tongasoa ianao hitsidika anay.
F: Inona ny fe-potoana fandoavana ny lohan-doha?
A: fametrahana 30% TT mialoha alohan'ny famokarana, 70% aloa alohan'ny fanaterana.
F: Azonao atao ve ny mamokatra ny volavolainay?
A: Azo antoka fa azo ampiasaina ny volavolanao raha toa ka mahazo santionany sy
F: Ahoana ny amin'ny ora fandefasana anao?
A: Haharitra 10 ka hatramin'ny 15 andro aorian'ny fahazoana antoka mialoha. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny haben'ny baikonao.
F: Alohan'ny hanamboarako ny lalamby tohatra dia tiako ho fantatra hoe karazana vy inona no tsara kokoa, vy vy tsy misy vy na fanamoriana vy?
A: Ny vy tsy misy fangarony dia fitaovam-pifidianana ho an'ny lalamby satria mampiseho tanjaka sy hamafisana raha oharina amin'ny alimo. Raha miresaka estetika, vy dia manolotra tombony mazava. Noho ny halemem-panahiny, ny aliminioma dia mora tohina amin'ny gorodona sy tototra, ka sarotra ny manadio sy mitazona azy.
F: Nahita rano nipoaka avy amin'ny kofehy fantsona aho tao ambadiky ny lohan'ny fandroana. Fa misy inona?
A: Ny olana dia tsy ampy ny tombo-kase. Esory ny lohan'ny fandroanao avy amin'ny fantsom-pifandraisana ary apetaho amin'ny kasety ny plumber, fantatra koa amin'ny hoe teflon tape, mankany amin'ny fantsona. Mampiasà wrench fotsiny mba hanamafisana ny lohan'ny fandroanao hiverina amin'ny fantsona aorian'izay.
Shower Panel VS Tanan-dabozia tànana